अवलोकन restyled Vw Touran
र त, जर्मन उच्च गुणवत्ता मोडेल कसरी बनाउने र तिनीहरूलाई restyling, यो केवल सानो संशोधन, छैन पनि सबैभन्दा लाजमर्दो क्षणमा छ थाहा छ। बस घरेलू बजार मा एक नयाँ अद्यावधिक कार VW Touran देखियो। अझै पनि न्यून पारिएको गतिशीलता को अनुहार, न त कुनै पनि अनावश्यक प्रशस्त मा, सबै स्पष्ट शीर्ष दस मा संकेत गर्नुभयो। कसरी जाडो टायर चयन गर्न को लागि: एउटा कुरा - त्यहाँ कम्तिमा केही नकारात्मक मनाउन कुनै उजुरी छन्? त्यसपछि सैलून, छाला सबै सजाया, तर कम लागत-स्तर लागि सबै छाला छोट्याउन रूपमा, एक सानो बिट महंगा छ: प्यानल ,, बस्ने, स्टेरिड़, लीवर एक गियर परिवर्तन को। छाला सिट को छाला सुरक्षित गर्न सकिएन र अन्त मा रकम थोडा सस्ता, जो अधिक खरीदार आकर्षित थियो। Ergonomics शायद सबै सुपर शीर्ष, प्रतिद्वन्द्वी मा एक व्यवस्थापन कन्सोल भएको छ, सजिलो सूचनात्मक र पहुँचयोग्य।
पनि भारी लुगा मा सानो घर बस Rubble को लम्बाइ, रहन ठाउँ छ। को बुट को गुहा - 700 लिटर, यो परिवार स्तर को लागि, हामी निर्धक्क भई आफ्नो बैग राख्नु र टाढा जान सक्नुहुन्छ राम्रो छ।
जो पेट्रोल मा टिक छ 140 घोडाहरू, संग 1.4 लीटर इन्जिन, बरु चुपचाप मिसिन, sedans ,, hatchback, र 7-stupenchastaya केपी Touran तपाईं आफ्नो अस्तित्व बारे भूल गर्न अनुमति दिन्छ संग प्रतिस्पर्धा मदत खींचती, यो गएका र भूल गरेको छ। एक चिप्लो सतह मा सामने धुरा मा लोड अलिकति ग्याँस मा धक्का भने, पाङ्ग्रा तुरुन्तै पुस्तक मा तोड, सानो छ कि सजिलै देखिने छ। तर सुक्खा जमीन मा, त्यहाँ बिल्कुल कुनै टिप्पणी, त्यहाँ प्रशंसा छ।
ब्रान्ड-नयाँ सुविधा वैकल्पिक Touran पार्क सहायक, दोस्रो जो पाङ्ग्रा छोएर, र केवल प्रसारण स्विच थप्न वा ग्याँस वा ब्रेक पिन कम गर्न bortovoko कम्प्युटर निर्देशनहरूको प्रयोग गरेर बिना पार्क गर्न अनुमति दिन्छ पुस्ता छ।
बस Touran सुसज्जित नवीनतम प्रविधि संग संगीत वक्ता संग स्तम्भ चयन गर्ने बारे थप पढ्नुहोस्।
सम्झौता इन्जिन, खरीदार गर्न मेमो।
आफ्नै हात संग वाल्व 2107 समायोजन
ठोस र विश्वसनीय फोर्ड च 250
हामी हिउँदमा कार शोषण: कसरी कार तयार गर्न र के को लागि हेर्न
2011 मा कार मा कर
इन्जिन शुरू - को मोटरहाक्ने व्यक्ति सुरु
पुस्तक कसरी अनुमान गर्न? साधारण भविष्यवाणी प्रविधी
Recessed शौचालय: स्थापना विशेषताहरु
विविधता को विवरण: मूल अंगूर। अङ्गुर मूल को खेती को सुविधाहरू
होटल "मिडल्यान्ड" Sheremetyevo: समीक्षा र फोटो
गंभीर पेट दुखाइ तल्लो फिर्ता गर्न radiating
ग्लास चाउचाउ: हामी विभाजित तर तयार
Valerian को Tincture: लाभ र हानि, प्रयोगको लागि निर्देशन
क्यामरी 40 (टोयोटा क्यामेरी): निर्दिष्टीकरण
लिथियम हीड्राकसीड र पोटासियम हीड्राकसीड। चिकित्सा र खाद्य उद्योग मा
वर्ग "बोनस-Malus" - यो के हो? वर्ग "बोनस-Malus" तपाईं कसरी थाहा छ?
जंगल मा संकलित मशरूम कसरी सफा गर्न, र तिनीहरूलाई को जो पकाउन सक्छ